राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सम्भावित पाँच मुख्य प्रशिक्षक | Hamro Khelkud
राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सम्भावित पाँच मुख्य प्रशिक्षक
बिहीबार, मंसिर २, २०७८
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – राष्ट्रिय क्रिकेट टोली वर्तमान समयमा मुख्य प्रशिक्षक विहीन छ । असोजमा मुख्य प्रशिक्षक डेभ ह्वाटमोरले राजीनामा दिएपछि विहीन बनेको पदमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) नियुक्त गर्ने तयारीमा छ । नेपाली क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षक बन्न ६० प्रशिक्षकले आवेदन दिएका छन् । क्यानले उत्कृष्ट १५ जनाको अन्तरवार्ता लिँदै एक उत्कृष्ट प्रशिक्षक नियुक्त गर्नेछ ।
ह्वाटमोरले ब्याटिङमा ठूलो परिवर्तनको सम्भावना देखाएपनि धेरै समय टिक्न सकेनन् । गत माघमा नेपाल आएका ह्वाटमोर पारिवारिक कारण देखाउँदै नेपाल छाड्दै भारतको बरोडा क्रिकेट सम्हाल्न पुगेका छन् । ओपनिङ सुधार र आक्रामक क्रिकेटको सुरुवात ह्वाटमोरले छाडेका प्रभाव हुन् । पछिल्लो समय क्रिकेट टोलीले दीर्घकालिन प्रशिक्षक पाउन सकेको छैन । उच्च स्तरियमात्र होईन दीर्घकालिन प्रशिक्षक त्यतिनै आवश्यक बनि सकेको छ । विशेषगरि कमजोर ब्याटिङ सुधारको लागि उच्च स्तरिय प्रशिक्षक ल्याउन क्यान चुक्न हुँदैन ।
अबको मुख्य प्रशिक्षकबाट नेपालले २०२२ को टि२० विश्वकप र २०२३ मा ओडिआई मान्यतालाई निरन्तरता दिने हुनेछ । त्यस्तै विश्व क्रिकेट जगतमा फड्को मार्दै एसोसियटकै उत्कृष्ट टोलीको स्तरमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय खेलाडीको गैर जिम्मेवार पनि चिन्ताको विषय बन्न लागेको छ । खेलाडीलाई अनुशासनमा राख्न सक्ने, सबैलाई समान व्यवाहार गर्ने, मिलसानर, टेस्ट अनुभव र विश्वस्तरिय प्रशिक्षकको आवश्यक देखिन्छ ।
क्यानले मुख्य प्रशिक्षक नियुक्तको लागि १५ जनाको नाम सर्टलिष्ट गर्दै आइसिसीलाई पठाएको छ । सर्ट लिष्ट आइसिसीबाट स्वीकृति नआउँदा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न ढिलाई हुन पुगेको छ । क्यानमा आवेदन परेको मध्य नेपाली क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकको सम्भावना उच्च भएका ५ जना यस प्रकार छन् ।
५. ततेन्दा ताइबु (जिम्बावे)
जिम्बावेका पूर्व कप्तान तथा विकेटकिपर ब्याट्सम्यान ततेन्दा ताइबु नेपाली क्रिकेटका सम्भावित प्रशिक्षक हुन् । गतवर्ष टटेन्डा क्यानको शीर्ष तीनका रोजाईमा प्रशिक्षक थिए । ३८ वर्षिय ताइबुले २८ टेष्टमा एक शतक र १२ अर्ध शतक सहित कुल १५ सय ४६ रन बनाएका छन् । १ सय ५० ओडिआई खेलमा २ शतक र २२ अर्ध शतक सहित ३ हजार ३ सय ९३ रन बनाएका छन् । १७ टि२० आई, १ सय २१ प्रथम श्रेणी र २ सय ३१ लिष्ट ए खेलेका छन् ।
उनले २००१ देखि २०१२ सम्म जिम्बावेबाट खेलेका थिए । उनको नाममा अफगानिस्तानका स्पिनर राशिद खान अघि विश्वका सर्वाधिक कान्छा टेष्ट कप्तानको कीर्तिमान थियो । उनले मात्र २९ वर्षको समयमा क्रिकेटबाट सबैलाई आश्चर्य रुपमा सन्न्यास लिँदै चर्चमा काम गर्ने निर्णय लिएका थिए । चर्चमा लामो समय विताएपछि क्रिकेटमा फर्किएका थिए ।
पछिल्लो समय उनी घरेलु क्रिकेट खेल्दै आएका छन् । २००८ मा कोलकता नाइट राइडर्सबाट आइपिएल खेलेका थिए । ब्याटिङमा उनी स्तरिय खेलाडी हुन् । जिम्बावेका एक सफल खेलाडी ताइबु नेपाल आउन रुचि देखाइरहेका छन् । कमजोर ब्याटिङ समस्या अन्त्य गर्न क्यान पनि ताइबुलाई लिन सक्ने देखिन्छ । उनी अन्य प्रशिक्षकको तुलनामा केहि कम पारिश्रमिकमा पनि आउन सक्ने सम्भावना छ ।
४. पुबुदु दसानायके (श्रीलंका)
श्रीलंका क्रिकेट टोलीका पूर्व खेलाडी पुबुदु दसानायके नेपाललाई पहिलो पटक टि२० विश्वकप खेलाउने प्रशिक्षक हुन् । पुबुदुलाई नेपाली क्रिकेटका सर्वाधिक सफल प्रशिक्षक समेत भन्ने गरिन्छ । सन् २०११ देखि २०१५ सम्म पुबुदुको प्रशिक्षकमा नेपालले क्रान्तिकारी परिवर्तन गरेको थियो । सन् २०१४ मा नेपालले पहिलो पटक टि२० विश्वकप खेलेको थियो ।
नेपाली क्रिकेटलाई नजिकबाट नियालिरहेका पुबुदुलाई ल्याउँदा नयाँ फड्को मार्न सक्ने क्यानले आशा राखेको छ । पुबुदुको प्रशिक्षकमा नेपालले डिभिजन ४ देखि ३ सम्म उपाधि जितेको थियो । नयाँ प्रशिक्षक ल्याउँदा खेलाडी बुझ्नै लामो समय लाग्ने समस्याबाट बच्न पुबुदु त्यसको विकल्पमा छन् । खेलाडी र पुबुदुबीच राम्रो सम्बन्ध छ । उनी दीर्घकालिन काम गर्न इच्छुक रहँदै आएका छन् ।
गत असोजमा भएको एभरेष्ट प्रिमियर लिगमा पुबुदुले भैरहवा ग्ल्याडियटर्सको प्रशिक्षणको रुपमा लिएका छन् । नेपाली क्रिकेटलाई धेरै नजिकबाट हेर्दै आएका पुबुदुलाई ल्याउँदै नेपाल तीव्र रुपमा तयारी अगाडि बढाउन सक्छ । पुबुदु नेपाली क्रिकेटसँग राम्रोसँग घुलमिल हुँदा क्यान उनलाई ल्यान इच्छुक रहेको बुझिएको छ ।
३. चेतन शर्मा (भारत)
भारतीय पूर्व क्रिकेटर चेतन शर्मा नेपाली क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षक बन्न ईच्छा व्यक्त गर्दै आएका छन् । ५५ वर्षीय चेतन गतवर्ष आवेदन दिएपनि छनोट भएका थिएनन् । पूर्व मध्यगतिका बलर चेतन शर्मा यस पटक भने सम्भावित दाबेदारको दौडमा छन् । चेतनले भारतबाट २३ टेस्ट र ६५ ओडिआई खेलेका छन् ।
उनी एकदिवसिय विश्वकप इतिहासमा ह्याट्रिक लिने पहिलो खेलाडी हुन् । सन् १९८७ को एकदिवसिय विश्वकपमा न्युजिल्यान्डविरुद्ध ह्याट्रिक लिएका थिए । उनले ओडिआई भारतबाट ६७ विकेट लिनुको साथै ४ सय ५६ रन बनाएका छन् । १९८९ मा कानपुरमा इंग्ल्यान्डविरुद्ध १ सय १ रनको शतकीय इनिङ खेलेका थिए ।
चेतन वर्तमान समयमा बिसिसिआईका खेलाडी छनोट समितिका प्रमुख हुन् । उनको बिसिसिआईमा प्रमुख छनोटकर्ताको अवधी डिसेम्बरमा सकिदै छ । बिसिसिआईसँग राम्रो सम्बन्धको कारण नेपालले धेरै लाभ लिनसक्ने हुँदा उनलाई नियुक्त गर्न सक्छ ।
२. क्रिस हेरिस (न्युजिल्यान्ड)
न्युल्यिान्डका पूर्व अलराउन्डर क्रिस हेरिस नेपाली क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षक बन्न आवेदन दिएका सबैभन्दा ठूला नामका खेलाडी हुन् । उनी न्युजिल्यान्डबाट २ सय ५० ओडिआई खेल खेल्ने पहिलो खेलाडी हुन् । नेपाली क्रिकेटको प्रशिक्षक बन्न आवेदन दिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा खेलाडीको रुपमा सबैभन्दा राम्रो अनुभव बोकेका प्रशिक्षक हुन् । उनले न्युजिल्यान्डबाट २३ टेस्ट, २ सय ५० ओडिआई, १ सय ३१ प्रथम श्रेणी र ४ सय ४८ लिष्ट ए खेल खेलेका छन् ।
सन् १९९० देखि २००० सम्म दशकमा उनी विश्व क्रिकेटकै एक प्रभावशाली अलराउन्डर मानिन्थे । टेस्टमा ५ अर्धशतक सहित ७ सय ७७ रन बनाउनुको साथैं १६ विकेट लिएका छन् । उनले ओडिआईमा १ शतक र १६ अर्धशतक सहित कुल ४ हजार ३ सय ७९ रनका साथै २ सय ३ विकेट लिएका छन् । उनीसँग विश्व स्तरिय खेलको राम्रो अनुभव छ । ओडिआईका विशेष खेलाडी हुँदा नेपाल पनि त्यस्तै चाहन्छ । ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङ तीनै क्षेत्रमा हेरिस अब्बल मानिन्छन् । क्यान पनि एकै प्रशिक्षकबाट तीन पक्ष सुधार गर्न चाहन्छ ।
त्यो अवस्थामा पारिश्रमिकमा सहमति भएको खण्डमा क्रिस हेरिस नेपाली टोलीको प्रशिक्षकको रुपमा देखिने सम्भावना बढी छ । हेरिस जस्ता विश्वस्तरिय अनुभवी पूर्व खेलाडी नेपाली क्रिकेटलाई आवश्यक पनि देखिन्छ ।
१. मोन्टी देशाई (भारत)
नेपालले अब मुख्य प्रशिक्षकमा भारतीय मोन्टी देशाईलाई पाउने उच्च सम्भावना छ । देशाई वर्तमान समय वेस्टइन्डिजको ब्याटिङ प्रशिक्षक हुन् । अर्को महिनादेखि वेस्टइन्डिजमा उनको सम्झौता सकिने छ । त्यसपछि देशाई वेस्टइन्डिज छाडेर नेपाल आउने सोचमा छन् । देशाईसँग १२ वर्षदेखि प्रशिक्षणको अनुभव छ । उनले अफगानिस्तान, नेपाल, युएई, क्यानडा, आइपिएलमा गुजरात लायन्यस, राजस्थान रोयल्स र भारतीय घरेलु क्रिकेटमा आन्द्र प्रदेश हेरि सकेका छन् ।
नेपालको मुख्य समस्या पनि ब्याटिङ रहँदै आएको छ । मोन्टीले ब्याटिङमा परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । इतिहास देखिनै कमजोर ब्याटिङ सुधार गर्न नेपालले मोन्टी देशाईलाई प्रशिक्षकको रुपमा नियुक्त गर्नसक्छ । मोन्टीले नेपाली क्रिकेटलाई धेरै नजिकबाट हेर्दै आएका छन् । सन् २०१७ मा नेपाली यू१९ टोलीले भारतलाई हराउँदा मोन्टी नेपालका ब्याटिङ सल्लाहकार थिए ।
सन् २०१५ मा आयरल्यान्ड र स्कटल्यान्डमा भएको विश्व ट्वान्टी–२० छनोटमा देशाई नेपाली टोलीसँग रहेका थिए । त्यसअघि सन् २०१४ को विश्वकपमा पनि उनी नेपाली टोलीमा आबद्ध थिए । २०१९ मा एकदिवसिय विश्वकप छनोटमा अफगानिस्तानलाई च्याम्पियन बनाउन मोन्टीको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । वेस्टइन्डिजमा पनि ब्याटिङमा राम्रो प्रभाव छाडेका छन् ।
मोन्टीले २०१९ मै नेपालको दीर्घकालिन प्रशिक्षक बन्न ईच्छा जनाएका थिए । तर क्यान नहुँदा त्यो सम्भव नभएपछि मोन्टी क्यानडा हुँदै वेस्टइन्डिजसँग जोडिएका थिए । मोन्टीलाई ल्याउँदा भाषामा पनि सहज हुनेछ । उनीसँग विश्व क्रिकेटको राम्रो अनुभव छ । भारतीय घरेलु क्रिकेटमा प्रशिक्षणको राम्रो अवसर पाउनेछन् ।
मोन्टी आफैंले पनि नेपाली टोली हेर्न इच्छा देखाउँदै आएका छन् । मोन्टी नेपाली क्रिकेटलाई आफूपनि केहि सहयोग गर्न चाहेको बताउँदै आएका छन् । टेस्ट र आइपिएलमा ब्याटिङ प्रशिक्षकमा राम्रो छवि बनाएका मोन्टी अव नेपाली क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षकको रुपमा बलियो सम्भावना रहन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : यस्तो चाहेको छ नेपाली क्रिकेटले प्रशिक्षक
नेपाली क्रिकेटमा हराएको ‘रातो बल र सेतो जर्सी’